केपी ओली नसुध्रिए एक भएर जाने आधार छैन : नेता नेपाल – Satabdi News
होमपेज / मुख्य समाचार / केपी ओली नसुध्रिए एक भएर जाने आधार छैन : नेता नेपाल
केपी ओली नसुध्रिए एक भएर जाने आधार छैन : नेता नेपाल
शुक्रबार, बैशाख ०३, २०७८ , शताब्दी न्युज
वि.सं २०७८ बैशाख ३ शुक्रबार । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी ओली सुध्रने छाँटकाँट नभएको बताएका छन् । शुक्रबार झापाको बिर्तामोडमा एमाले समानान्तर कमिटीको घोषणा गर्दै नेता नेपालले भने, ‘केपी ओली सुध्रिएलान् जस्तो लाग्दैन । झापामा धामी, झाँक्री वा मोटिभेटर छन् भने पठाउनुहोला,’ उनले भने, ‘कस्ता–कस्तासँग त मिलियो । उहाँ सच्चिनुभयो भने मिलिन्छ ।’
ओली झुटको खेती गर्न सिपालु भएको बताए । ओलीले झुटको प्रचार गर्न समूह नै बनाएको आरोप लगाए । ‘उहाँ झुटको खेती गर्न सिपालु हुनुहुन्छ । त्यसका लागि केही व्यक्ति राखेर साइबर स्याल बनाउनुभएको छ,’ वरिष्ठ नेता नेपालले भने, ‘उहाँका कारण पार्टी र आन्दोलन समाप्त हुने दिशामा गयो ।’
उनले प्रधानमन्त्री ओली २ जेठ ०७५ मै फर्किए मिल्न सकिने बताए । पार्टी एक हुनका लागि ओलीले २८ फागुनको बैठकबाट पदाधिकारी खारेज गर्ने निर्णय र विधान संशोधन गरेर २३ जनालाई मनोनीत गर्ने निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने उनले बताए । तर, आफूहरूले पुरानो कुरा बिर्सेर नयाँ ढंगबाट अघि बढ्न प्रस्ताव गर्दा पनि ओली त्यसको पक्षमा नरहेको जिकिर गरे ।
‘ओलीले २८ फागुनको निर्णय सच्याए हामी मिल्न तयार छौँ । उहाँको मानसिकता विरोधीलाई ठेगान लगाउने छ । उहाँ आलोचना सुन्न सुक्नुहुन्न आलोचना गर्नेलाई पत्तासाफ गर्न लाग्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘अध्यक्ष र महासचिव पद राखेर उहाँको गुटको भेलाले अरू खारेज गरेछ । अध्यक्ष र महासचिव पनि एमालेको विधानअनुसार नै बनेको हो । अनि त्यो राख्ने अरू खारेज गर्ने ? यो कस्तो विभेद हो ? एमालेको विधानअनुसार महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएकालाई अर्को महाधिवेशनसम्म हटाउन पाइँदैन ।’
प्रधानमन्त्री ओली विधि र विधानअनुसार नचलेको आरोप लगाए । आफू अल्पमतमा पर्ने भएपछि पदाधिकारी खारेज गरेर आफूखुसी केन्द्रीय समितिमा मनाेनीत गरेको उनको आरोप छ । ओलीले पार्टीभित्र ‘एस म्यान’ खोजेको आरोप लगाए । ‘उहाँ बहुमत पुर्‍याउन सीमा नाग्नुहुन्छ । सबै अधिकार हातमा लिनुहुन्छ । माधव नेपालले अपराध गरे रे ! विधि र विधानसँग नचल्ने केपी ओली । अपराध गर्ने केपी ओली, आरोप हामीलाई ?’ उनले भने, ‘केपी ओलीले आन्दोलन र संगठन पनि बनाएका हाेइनन् ।’
उनले प्रधानमन्त्री ओलीले ‘भजन मण्डली’ बनाउन खोजेको आरोप लगाए । तर, त्यहाँ जान कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्तालाई स्वाभिमानले नदिने उनको भनाइ थियो । ‘हामी अपमान र अन्याय सहँदैनौँ,’ उनी भन्छन्, ‘कम्युनिस्ट पार्टीमा विधि र विधान प्रधान हुन्छ । नेता गौढ हुन्छ ।’ प्रधानमन्त्री ओली पद जोगाउन जे पनि गर्न तयार भएको उनको आरोप छ । ‘ओली एक नम्बरका खेलाडी हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘पद जोगाउन जे पनि गर्छन् । पार्टी राम्ररी चलाउन सक्दैनन् । पद जोगाउन अरूसँग हारगुहार गर्छन् ।’
प्रधानमन्त्री ओली र उनको व्यवहारसँग कोही पनि प्रभावित हुन नसक्ने दाबी गरे । नेता नेपालले ६८ जिल्लामा समिति बनाउँदा देशभर आफूहरूको अवस्था राम्रो रहेका बताए । ओली समूहले आफूहरूको समितिलाई समानान्तर भने पनि मूल पार्टी हुने उनको दाबी छ ।
कार्यक्रममा एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसालले ओलीमा सत्ताका लागि सम्झौता गर्ने र सत्तामा पुगेपछि बिर्सने प्रवृत्ति रहेको बताए । ओलीले गरेको कही पनि निर्णय पार्टी कमिटीमा ल्यान नमान्ने गरेको उनको भनाइ थियो । ‘नेकपा हुँदा गत भदौमा हामीले पाँच वर्ष तपाईं नै प्रधानमन्त्री, महाधिवेशनसम्म तपाईं नै अध्यक्ष भनेका थियौँ । तर, सरकारमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न स्थायी कमिटीमा ल्याउनुभएका हौँ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, उहाँले त्यसो गर्नुभएन । उल्टै संसद् विघटन गर्नुभयो ।’
प्रधानमन्त्री ओलीको व्यक्तिवादी चरित्रले पार्टी तहसनहस भएको बताए । ‘उहाँ (ओली)मा व्यक्तिवादी चरित्र छ । उहाँ म बस्न नपाउने भए कुर्सी नै भाँच्छु भन्नुहुन्छ,’ भुसालले भने, ‘ओलीले जहाँ पनि कि झुट बोल्छन् कि गालीगलाैज गर्छन् । कोही नेपाली आमाले मेरा सन्तान यस्तो जन्मिउन् भन्दैनन् ।’ ओली सत्ताका लागि जे गर्न तयार हुने बताए । ‘सत्ताका लागि ओली जे गर्न तयार छन् । नांगिन, भिड्न पनि तयार छन्,’ उनले भने, ‘ओलीलाई अडान भएको नेता भन्छन् । अडान केलाई लिने ? अरूमा हाेइन सत्ताका लागि जे गर्न तयार हुनुलाई अडान भन्ने हो भने ठीक हो । तर, अरूका लागि हाेइन ।’
उनले प्रधानमन्त्री ओलीका कारण पार्टीमा योगदान नभएको मान्छेलाई चुनावमा टिकट दिनुपरेको बताए । ‘एकजना गायिकालाई टिकट दिन उहाँले एकजना गायिकाको नाममा जिद्दी गर्नुभयो । गायिका पनि जनताको नाममा गीत गाउने हाेइन । गायिकालाई टिकट दिन तीन दिनसम्म किचकिच गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘पार्टीलाई बन्धक बनाएपछि फिरौतीबापत टिकट दियौँ ।’
नेपालमा कम्युनिस्ट कार्यकर्ताले झापा आन्दोलनलाई आदर्श मान्ने गरेको बताए । तर, झापा आन्दोलनमा सहभागी ओलीले गद्दारी गरेको उनको टिप्पणी थियो । ‘प्रधानमन्त्रीले झापालाई सुपर जिल्ला भन्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘अब तपाईंहरूले झापा प्रतिक्रियावादीको सुपर जिल्ला हो कि क्रान्तिकारीको फैसला गर्नुपर्छ ।’
You have reacted on "केपी ओली नसुध्रिए एक भएर जाने आधार छैन : नेता न..." A few seconds ago